गोपनीयताको हकका कानुनमा जेलिएका स्नोडन
[2013-07-27 오후 8:00:00]
अमेरिकी तथा बेलायती सरकारका सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरेको आमसतर्कता कार्यक्रमको उच्च गोपनीयताका विषयमा आमसञ्चारलाई सूचना चुहाउने व्यक्ति एडवर्ड जोसेफ स्नोडनले रसियामा अस्थायी शरणका आग्रह गरेका छन् र रसियामा प्रवेश गर्न अनुमति दिने कागजातको प्रतिक्षामा छन् । यसबाट स्नोडनलाई करिब एक महिना बिताएको मस्को विमानस्थलबाट बाहिर जान अनुमति प्राप्त हुनेछ ।
यसबीच अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संस्था (एनएसए)का पूर्व प्राविधिक ठेक्केदार तथा केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सीआईए) का पूर्व कर्मचारी ३० वर्षीय स्नोडन अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ पछि एनएसएको आमगुप्तचरी तथा सरकारी गोपनीयता भङ्ग गरेको, राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पारेको, मुलुकप्रति द्रोह गरेको, जनताको गोपनीयताका हकको पक्षमा बोलेको, जनताको सुसूचित हुने हकको संरक्षणमा उभिएको र जनताको पक्षमा सूचना सार्वजनिक गरेको (ह्विसलब्लोइङ) जस्ता निकै जटिल कानुनी विषयमा जेलिएका छन् ।
स्नोडनले यसै गृष्ममा लन्डनको द गार्जिनका ग्लेन ग्रिनवाल्डलाई यस विषयमा सूचना दिएका हुन् । यस समयमा उनी एनएसएका ठेक्केदार बुज एलन ह्यामिल्टनका लागि संरचना विश्लेषकको रूपमा कार्यरत रहेका थिए । द गार्जियनले पनि सन् २०१३ को जुन तथा जुलाइमा यस विषयमा विभिन्न सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्नोडनले अमेरिकी तथा बेलायती सुरक्षा संस्थाले अमेरिकी तथा युरोपेली टेलिफोनको तथ्याङ्कको तथ्याङ्क (मेटाडाटा) प्राप्त गरेको, गोप्य रूपको विद्युतीय गुतचरी तथ्याङ्क भण्डारण (प्रिजम) तयार गरेको तथा बेलायती सरकारको सरकारी सञ्चार मुख्यालयलले सञ्चालन गरेको गोप्य विद्युतीय गुप्तचरी कार्यक्रम (टेम्पोरा) का विषयमा जानकारी दिएका थिए । यो एनएसएका विषयमा हालसम्म अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो गोप्य सुरक्षा विवरण चुहावट हो ।
यसरी अमेरिकी तथा बेलायती गोप्य सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा जानकारी बाहिर ल्याउनुलाई अमेरिकामा निकै विवाद तथा गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा हेरिएको छ । केहीले स्नोडनलाई बहादुर व्यक्तिको रूपमा हेरेका छन् । उनले सार्वजनिक हितका लागि सूचना बाहिर ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । स्नोडनले पनि यसरी सूचना बाहिर ल्याएर आफूले जनताको नाममा सरकारद्वारा जनताविरुद्ध गरेको काम सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरूले स्नोडनको कामप्रति भत्र्सना गरेका छन र यसले अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था तथा आतङ्वादविरुद्धको युद्धलाई क्षति पुर्‍याउनसक्ने दाबी गरेका छन् । जुन १४ मा स्नोडनमाथि अमेरिकी सङ्घीय अधिवक्ताहरूले सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको तथा सरकारी सम्पत्ति चोरेको अभियोग लगाएका छन् ।
उत्तरी क्यारोलिनाको एजिलावेथ नगरमा जन्मेका तथा विलमिङटनमा हुर्किएका स्नोडनले माध्यमिक शिक्षाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न एन एरुन्डल सामुदायिक कलेजमा गरेको प्रयास सफल भएन । उनका बाबुले स्नोडन निकै महिना बिरामी भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् । तर पनि उनले स्थानीय सामुदायिक कलेजबाट अमेरिकी तथा क्यानडाको माध्यमिक शिक्षाको स्तरको सीप परीक्षा ‘जनरल एजुकेसन डेभलपमेन्ट’ उत्तिण गरेका छन् । कामको सिलसिलामा जापानमा रहेको अमेरिकी सैनिक केन्द्रमा रहेका स्नोडन जापानी संस्कृति र जापानी भाषामा राम्रो दखल गरेका छन् ।
सन् २००४ मा उनी इराकयुद्धमा संलग्न हुन अमेरिकी सेनाको विशेष सैनिकमा भर्ना भएका थिए तर दुबै खुट्टा भाचिएकाले उनले तालिम सम्पन्न गर्न सकेनन् । पछि उनी मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयको सेन्टर फर एडभान्स स्टडी अफ ल्याङवेजमा सुरक्षाकर्मीको रूपमा भर्ना भए । कम्प्युटरमा विशेष चासो राख्ने स्नोडनलाई सूचना प्रविधिको सुरक्षाका लागि सीआईएमा भर्ना हुन खासै दु:ख भएन ।
पत्रपत्रिकालाई स्नोडनले आफू स्विजरल्यान्डको जेनेभामा कूटनीतिज्ञको रूपमा सीआईएको कम्प्युटर सञ्जालको सुरक्षाका लागि काम गरेको बताएका छन् । सन् २००९ मा स्नोडनले एनएसएको जापानमा अमेरिकी सैनिक केन्द्रमा निजी ठेकेदारको रूपमा काम गरेको गार्जियनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यहा उनी डेलको कर्मचारीको रूपमा रहेका थिए । यसपछि उनले यसै संस्थामा अति गोप्य संवेदनशील सूचनाका लागि काम गरे । न्यु योर्क टाइम्सले स्नोडनले सन् २०१० मा सर्टिफाइड इथिकल ह्याकरको पनि तालिम लिएको समाचार दिएको छ । अमेरिकाबाट बाहिरिनुपूर्व स्नोडनले अमेरिकी परामर्शदाता संस्था बुज एलन ह्यामिल्टनका लागि एनएसएमा काम गरेका थिए । यस समयमा उनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र उनैका शब्दमा संरचना विश्लेषकको रूपमा काम गर्थे । यसको अर्थ उनी विश्वभरका इन्टरनेट तथा टेलिफोन सञ्चारका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नसक्थे।
स्नोडनले आफूसाग भएको जानकारी हङकङबाट गार्जियनलाई दिएका हुन् र त्यहाबाट उनी जुन २३ मा मस्कोका लागि प्रस्थान गरे । यसबीच अमेरिकी सरकारले हङकङलाई स्नोडनलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिसकेको थियो । स्नोडनले आइस्ल्यान्डमा शरणको खोजी गरेका थिए तर कानुन अनुसार शरण प्राप्त गर्न पुग्नु आवश्यक थियो ।
जुन २३ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले स्नोडनको अमेरिकी राहदानी रद्द गरिदिएका थिए । मस्कोको सेरेमेत्येभो विमानस्थलमा रहेका स्नोडनलाई इक्वेडोरले पनि राजनीतिक शरण दिने कुरा सार्वजनिक भएको थियो तर यस मुलुकको अमेरिकासाग हस्तान्तरण सन्धि भएको थियो । रसियामा स्नोडनलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबाट अमेरिकालाई थप क्षति नपुर्‍याउने सर्तमा बस्न अनुमति प्राप्त थियो ।
अर्कोतिर स्नोडन सेरेमेत्येभो विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्ने आवागमन (ट्रान्जिट) कक्षमा छन् । अमेरिकी अधिकारीहरू पनि स्नोडनलाई अमेरिकालाई बुझाउन निरन्तर रूपमा रसियामाथि दबाब दिइरहेका छन् । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता एरिक होल्डरले रसियाली समकक्षीलाई स्नोडनमाथि मृत्युदण्डको माग नगरिने आश्वासन दिएका छन् ।
यसबीच स्नोडनलाई रसियाबाट बाहिर ल्याउन खोजेको भनी बोलिभियाका राष्ट्रपति एभो मोराल्सको विमानलाई रसियाबाट बाहिर जान कठिनाइ सिर्जना गरिएको थियो । अस्ट्रिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन तथा इटालीले राष्ट्रपति मोराल्सको विमानलाई आफ्नो हवाइक्षेत्र उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिदिए । सेरेमेत्येभो विमानस्थलबाट स्नोडनले २० मुलुकलाई आफूलाई शरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको जानकारी विकिलिक्सले दिएको छ । यसबीच उनले रसियामै अस्थायी शरणका लागि आग्रह गरे ।
अर्कोतिर निकारागुवा, भेनेजुला, बोलिभियाले स्नोडनलाई शरण दिने बताए । उक्त भनाइ निकारागुवाका राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्तेगा, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो तथा बोलिभियाका राष्ट्रपति मोराल्सबाटै आएका हुन् । उनलाई क्युवामा प्रवेशको अनुमति प्राप्त छ र यो अनुमति क्युवाका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले दिनुभएको हो ।
वास्तवमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सूचना चुहाउने स्नोडन पहिला व्यक्ति होइनन् । यसअघि सन् १९७१ मा अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको सूचना ड्यानियल एल्सबर्गले चुहाएका थिए । यसैगरी विलियम बिन्नीले एनएसएको आम सतर्कताको विषयमा सूचना चुहाएका थिए । सै संस्थाका पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी थोमस ड्रेकले पनि सूचना चुहाएका थिए ।
विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको बहादुरी र त्यसपछिको पीडा विश्वसामु छ ।
एफबीआईका सूचना चुहाउने सामाइ लिबोविजको अर्कै कथा छ । यी सबैले स्नोडनको कामलाई राम्रै मानेका छन् र उनीहरूले स्नोडनको सूचना चुहाइको प्रभाव निकै गहन भएको उल्लेख गरेका छन् । ग्यालप पोलले गरेको एक सर्वेक्षणमा स्नोडनले गरेको चुहावटलाई ४४ प्रतिशत अमेरिकीले समर्थन गरेको देखिएको छ भने ४२ प्रतिशत अमेरिकीले यो गलत काम भएको बताएका छन् ।
युएसए टुडे र प्यु रिसर्चले गरेको सर्वेक्षणमा ४९ प्रतिशतले स्नोडनको चुहावट सार्वजनिक हितमा भएको उल्लेख गरेका छन् र ४२ प्रतिशतले यसले उनीहरूलाई हानि गर्ने बताएका छन् ।वासिङटन पोस्ट तथा एबीसी न्युज पुलले गरेको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशतले स्नोडनलाई कारवाही गर्न नहुने बताएका छन् ।
किनिपियाक विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशतले स्नोडनले सार्वजनिक हितमा सूचना दिएको बताएका छन् भने ३४ प्रतिशतले स्नोडन राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । यी जानकारीहरू विकिपेडियाबाट लिइएको हो । स्नोडनका पक्षमा नोम चोम्स्की, क्रिस हेज, माइकल मुर, कर्नेल वेस्ट, ग्लेन बेक, म्याट ड्रज, अलेक्स जोन, एन्ड्रियु नापोलिटानो, ओलिभर स्टोन, माइकाल स्याभेज तथा स्टेफेन वाल्टजस्ता विख्यात राजनीतिक विश्लेषक देखापरेका छन् । अर्कोतिर युरोपेली मुलुक तथा अमेरिकाबीच नागरिकको गोपनीयताको हकका विषयमा विवाद नै चलेको छ । यसैले जर्मनीमा एमनिडले गरेको एक सर्वेक्षणमा भाग लिने ५० प्रतिशतले स्नोडनलाई बहादुर व्यक्तिको रूपमा लिएका छन् ।
स्नोडनले भने आफू त्यस्तो समाजमा बााच्न नचाहेको जहाा नागरिकमाथि यत्ति धेरै गुप्तचरी होस् र त्यस्तो विश्वमा पनि बाच्न नचाहेको जहाा आफूले भनिएका सबै कुरा रेकर्ड होस् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूले गरेको कामबाट हुने पीडा थाहा भएको र त्यो आफ्नो अन्त्य हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले आफ्नो परिचय लुकाउने कुनै अभिप्राय नभएको पनि बताएका छन् । तर धेरै विशेषज्ञको धारणामा स्नोडनसाग अझै त्यस्ता सूचना छन् जसले अमेरिकी सुरक्षा संस्थालाई अझै प्रभाव पार्नसक्छ ।
यी सबैबीच केही प्रश्न उब्जेका छन् : व्यक्तिको गोपनीयताको हक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचनाको गोपनीयताको आवश्यकता सीमा कहाासम्म छन् ? राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गुप्तचरी र जनताको सुसूचित हुने हकको सीमा कतिसम्म रहेका छन् ? यी सबै कुरामा सार्वजनिक हितका लागि सूचना चुहाउने कुराको सीमा के हो ? यी यस्ता प्रश्न हुन जसको सरल उत्तर कसैसाग पनि छैन र यी प्रश्नका मूल आधार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डता रहेका छन् भावनाले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । स्नोडनलाई यसपछि के हुन्छ – हेर्न बाकी छ ।
(स्रोत : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था तथा इन्टरनेटका सामग्री)